Breaking : भर्खरै ! अन्तराष्टिय एयरपोर्टमा ल’फडा भयो यो के हुदै छ ? [भिडियो सहित] – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/Breaking : भर्खरै ! अन्तराष्टिय एयरपोर्टमा ल’फडा भयो यो के हुदै छ ? [भिडियो सहित]
काठमाडौँ । भर्खरै नेपालको एयरपोर्टमा लफडा भयो यो के हुदै छ। अन्तराष्टिय एयरपोर्टमा आज कोरियाबाट आएका काहरुलाई रोकेर राखेको भन्दै ल’फडा गरिरहेका छन। को’रोना लागेको छैन भन्दै आ’न्दोलन गरिरहेका छन।